Tira intee dhan oo dibadbaxayaal ah ayaa loo baahan yahay si madaxweyne xilka looga tuuro
Wednesday October, 28 2020 - 16:47:57
TOOS/LIVE: Hawd Vs Buuhoodle
Madaxweynaha Somaliland Oo Dhaliilo U Jeediyay Hay'adaha Qaramada Midoobay
Xoghaya Cadaaladda Xisbiga waddani Oo Loga Yeedhay Xarunta Danbi Baadhista Baadhista Hargeisa
Gudoomiyaha Ha'yada Shaqaalaha Dawlada Oo Shaaciyay In Laga Helay Xanuunka Safmarka Ah Ee Covid-19.
Xildhibaanda Raysal Wasaare Ku Xigeenka La Kulmay Dambi Ayay Qaranka Ka Galeen.
Sunday September 20, 2020 - 08:38:45 in by salman abdi
Midkee ayaa wax ku ool ah dibadbaxyada rabshadaha iyo gacan ka hadalka wata iyo kuwa aan rabshadaha wadan?
Baaxad intee dhan ayaa se loo baahan yahay si hogaamiya siyaasadeed xilka loga tuuro?
Mid ka mid ah cilmibaarayaasha oo si taxadar leh u darstay su'aalahan, ayaa rumaysan in loo baahan yahay 3.5% ka mid ah bulshada si ay uu dibadbaxa u guuleysto.
Dhaqdhaqaaqyadii midnimada ee Poland ee sanaddii 1980-yadii , oo ay hogaaminayeen ururo, dhaqdhaqaaqii looga soo horjeeday midib-takoorka ee Koonfur Afrika, xil ka tuuristii madaxwaynihii Serbia Slobodan Milosevic; kacdoonkii Tunisia ee looga so horjeeday, Zine al-Cabidine Bin Cali kaasi oo huriyay kacdoonkii Carabta.
Dhammaan arrimahani waa tusaalooyiin la xusuusto oo ku saabsan kacdoonadii caanbaxay kuwaasi oo sababay isbadal siyaasadeed.
Midkii ugu dambeeyay imika ee diirada lagu hayo ayaa ah Belarus - halkaasi tobonnaan kun oo qof ay isugu soo baxeen waddooyiinka ka dib doorashadii lagu murmay ee uu guusha ka sheegtay madaxwayne Alexander Lukashenko.
Xukuumadda dalkaasi ayaa si arxan daro ah uga jawaabtay dibadbaxyadan, qaar badan oo ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa la xiray islamarkana waxaa jira eedeeymo badan oo la xiriira jirdil laga geysanayo goobaha dadka lagu xiro.
Waxaa sidoo kale xusid mudan in dibadbaxyadani ay yihiin kuwa guud ahaan si ammaan ah ku socda.
Ma laga yaabaa in ay guuleystaan?
Waa hagaag, mid ka mid ah siyaabaha lagu qiimaynayo ayaa ah in dib loo milicsado taariikhda.
Erica Chenoweth oo ah maclin cilmiga siyaasadda ka dhigta jaamacadda Harvard ayaa qiimayntan sameeyay.
XIGASHADA SAWIRKA,KRIS SNIBBE / HARVARD GAZETTE
Midkee baa wax ku ool ah Dibadbaxyada rabshado wata iyo midka aan rabshadaha wadan?
Baaxad intee dhan ayaa se loo baahan yahay si hogaamiya siyaasadeed xilka looga tuuro?
Mid ka mid ah cilmibaarayaasha oo si taxadar leh u darsay su'aalahan, ayaa rumaysan in lo baahan yahay 3.5% ka mid ah bulshada ayay guusha ku iman kartaa.
Dhaqdhaqaaqyadii midnimada ee Poland ee sanaddii 1980-yadii , oo ay hogaaminayeen ururo, dhaqdhaqaaqii looga soo horjeeday midib-kala soca, xil ka tuuristii madaxwaynihii Serbia Slobodan Milosevic; kacdoonkii Tunisia ee looga so horjeeday, Zine al-Cabidine Bin Cali kaasi oo huriyay kacdoonkii Carabta.
Dhammaan arrimahani waa tusaalooyiin la xusuusto oo ku sabsan kacdoonadii caanbaxay kuwaasi oo sababay isbadal siyaasadeed.
Midkii ugu dambeeyay imika ee diirada lagu hayo ayaa ah Belarus - halkaasi tobonnaan oo qof ay isugu soo baxeen waddooyiinka ka dib doorashadii lagu murmay ee uu guusha ka sheegtay madaxwayne Alexander Lukashenko.
Xukuumadda dalkaasi ayaa si arxan daro ah uga jawaabtay dibadbaxyadan, qaar badan o oak mid ah dibadbaxayaasha ayaa la xiray islamarkana waxaa jira eedeeymo badan oo la xiriira jirdil laga geysanayo goobaha dadka lagu xiro.
Waxaa sidoo klae xusid mudan in dibadbaxyadani ay yihiin kuwa guud ahaan si ammaan ah ku socda.
Erica Chenoweth oo ah maclin cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Harvard ayaa qiimayntan sameeysay.
Prof Chenoweth ayaa diiradda ku saartay daraasadeeda dhaqdhaqaaqyada ka dhanka ah kaligood-taliyayaasha ee ma aha midka dumuqraadiyada.
Sida dimuqraadiyadda oo kale, kaligood-taliyayaasha xukunka loogama qaadi karo doorasho iyo codeyn.
Dumuqraadiyadda, haddii nidaamyadu ay wanaagsanayn, siyaasiyiinta ayaa la dooran karaa iyada oo la eegayo ballanqaadayadooda ku aadan in ay nidaamkaasi meesha ka saarayaan oo ay isbadal sameynayaan.
Balse tani ma aha wadiiqada loo mari karo kalitaliyayasha, waxaa halkan ka muuqata micneyn loo baahan yahay in la qeexo.
Sharaxaadda iyo micnaynta dimuqraadiyada iyo kalitaliyayaasha ayaa halkan su'aal ka taagan tahay.
Nidaam siyaasadeed ayaa noqon kara mid dimuqraadiyadiisu sareyso iyo mid ay hooseyso.
Waxaa sidoo kale jirta in ay hadba ay ku xiran tahay sida aad u micneyso dibadbaxyada rabshadaha wata iyo kuwa nabdoon.
Weerarada loo geysto hantida ma waxaa loo tixgalinayaa inay yihiin "rabshad"?
Maxaa se ay noqon kartaa dibadbaxayaasha ku dhawaaqaya erayo cunsurinnimo ku dheehan tahay ama aflagaado iyaga oo aan wax gacan ka hadal ah geysan?
Maxay tahay ficilada sida in uu qofka naftiisa huro sida in uu cuntada ka soomo? Ma waxaa weeye rabshad iyo gacan ka hadal?
Iyada oo ay jirto inay adagtahay in kala saaridda arrimahan ayaa waxaa hadana jira qeyb ka mid ah dibadbaxyada oo aan rabshado wadan islamarakana ay jirto kuwa kala oo ay iska caddahay inay rabshad ku dheehan tahay.
Dilka way iska cadahay in uu yahay rabshad.
Waxaa sidoo kale jira dibadbaxyo nabdoon, codsiyo la gudbinayo, boorar, shaqa joojin iyo qaadacaad, dhammaan arrimahan waa kuwa aan rabshado ku saleysnayn.
Waxaa jira in 198 qeybood loo qeybiyay dibadbaxyada aan rabshadaha wadan.
Marka la lafa-guro dhaqdhaqaaqyadii dibadbaxyada ee la hayo macluumaadkoodka laga soo bilaabo 1900 ilaa 2006, Erica Chenoweth iyo Maria Stephan waxa ay baaritaankooda ku ogaadeen in laba jibaar ay suuragal tahay inay guuleystaan dibadbaxyada aan rabshadaha wadan.
Su'aasha xigta ayaa ah sabab?
Jawaabta ayaa u muuqata in ay tahay in rabshadaha ay hoos u dhigaan gundhigga taageerada dhaqdhaqaaqa.
Dad badan ayaa mar walba ku soo biira soo biira mudaaharaadyada aan rabshadaha wadan.
Kacdoonka aaan gacan ka hadalka wadan ayay halistiisu yartahay, waxaana loo baahan yahay oo kali ah in uu qofka goob joog ka ahaado islamarkana uma baahna tababar in dadka la siiyo.
Waxaa dadka ka qeyb qaadanaya dhaqdhaqaaqyada kacdoonka looga baahan yahay oo kali ah in waqti ay u huraan.
Dhammaan sababahan, dibadbaxyada aan gacan ka hadalka wadan ayaa waxaa sareysa inay ka qeyb galaan haweenka, caruurta, dadka naafada ah iyo waliba kuwa da'da ah.
Hadaba maxay arrintani muhiim u tahay?
Aan tusaale u soo qaadano kacdoonkii lagu magacaabi jiray Bulldozer ee looga soo horjeeday Slobodan Milosevic.
Markii askarta la waydiiyay sababta ay dibadbaxayasha hubka ugu isticmaali waayeen,waxay ku jawaabeen in qaar ka mid ah dibadbaxayaasha ay garanayeen.
Waxay ciidamada ka caga-jiidayeen inay toogteen ilama adeeradood, saaxibadood iyo waliba dariskooda.
Waxaa sidoo kale jirta in micno ay sameynayso tirada dibadbaxa ka qeyb galayso taasi oo laga yaabo in booliiska ay aqoonsadaan qaar ka mid ah dadka ka qeybgalaya.
Erica Chenoweth ayaa la timid tirada rasmiga ah ee ku saabsan in dibadbax ay ka qeyb qaataan ka hor inta aysan guuleysan.
Tiradaasi ayaa ah 3.5% bulshada halka ay dibadbaxayada ka dhacayaan.
Waxaa laga yaabaa in taasi ay kuula muuqato tira aad u yar.
Tirada dadka ku nool dalka Belarus ayaa ah mid ka kor u dhaafaysa 9 milyan, taasi waxay micnaheedu tahay in marka la dhaho 3.5% ay gaarayso 300,000.
Mudaaharaadyada ballaaran ee ka socda caasimadda, Minsk, ayaa lagu qiyaasay tobonnaan kun oo qof, amaba 100,000, inkastoo wakaalada wararka ee AP ay tirada ku sheegtay in ay ka badan tahay 200,000.
Marka tirada 3.5% la eego ma aha mid badan.
Booliiska rabshada ka hortaga ee Belarus
Dhaqdhaqaaqyo badan ayaa ku guuleystay iyada oo tiro intaasi ka yar tahay islamarkana hal ilaa labo dibadbax ayaa guuldareysta iyada oo ay jirto in tira badan ka qeyb galeen.
Chenoweth ayaa tusaale u soo qaadatay kacdoonada guuldareystay iyada oo ay jirto in dad badan ay ka qeyb qaateen sida kii ka dhacay Baxreyn sanaddii 2011 .
27/10/2020 - 12:47:58
" Tooshkii Aanu Markii Hore Ku Haynay Mid Ka Daran Ayaanu Ku Haynaynaa Kuwa Somaliya Xilalka
26/10/2020 - 17:17:08
Gudaha:-Xisbiga Ucid Oo Madaxweyne Biixi Ugu Baaqay In Uu Kala Diro Komoshinka Xakamaynta Aids s,lalnd.
26/10/2020 - 17:06:26
Xildhibaano Iyo Odayaal Madaxwaynaha Uga Mahadnaqay Magacabista Agaasimaha Cusub Ee Biyaha
25/10/2020 - 16:21:20
Masuuliyiinta Uu Madaxweyne Biixi Uu Magacaabay Iyo Kuwa Xilka Uu Ka Caydhiyey
24/10/2020 - 16:55:57
War Deg Deg Ah:-Golaha Wasiirada Cusub Ee Somalia Oo Hada La Dhaariyay+Tirada Wairada.
24/10/2020 - 12:47:16
Madaxweyne Biixi Iyo Wasiir Maxamed Kaahin Ku Saabsan Oo Wargeyska Geeska Afrika Dibedda U Soo Saaray
24/10/2020 - 12:09:49